गर्भवस्थामा किन लाग्छ वाकवाकी ? यस्तो छ घरेलु उपचार ! – Sandesh munch
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ०९, २०७७ समय: १८:०६:१४
ग’र्भावस्थामा महिलाहरुलाई वा’कवाकी लाग्ने गर्दछ । यो हरेकजसो महिलाहरुमा देखिने गर्छ । यस्तो किन हुन्छ भन्ने धेरैलाइ थाहा नहुनसक्छ । ग’र्भावस्थामा महिलामा आउने एचसिजी ह’र्मोनका कारण वा’कवाकी र रिं’गटा लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
अध्ययन अनुसार, ग’र्भावस्थामा आउने यस्तो हर्मोनले निषेचित अन्डालाई पाठेघरको भित्तामा आएर बस्न सघाउँदछ । यसबाहेक स्ट्रे’स र थ’कानका कारण पनि यस्तो हुन सक्दछ ।
यस्तो सम’स्याले आमालाई असहज हुन्छ तर पेटमा भएको बच्चालाई भने कुनै असर हुदैँन गर्भवती अवस्थामा वान्ता र वा’कवाकी लाग्ने अर्को कारण भने इस्ट्रोजिन ह’र्मोन हो ।
यस्तो हर्मोन ग’र्भवती महिलामा बढेर जान्छ । ७० प्रतिशत ग’र्भवती महिलालाई यस्तो लक्षण देखिने गरेको पाइन्छ ।चिकित्सकहरुका अनुसार, वा’कवाकी लाग्न ग’र्भवती भएको ४ देखि ८ हप्ताबाट शुरु हुन्छ ।
र, यो क्रम १३ देखि १४ हप्तासम्म नै रहन्छ । कसैकसैलाई भने यो भन्दा बढी समय सम्म हुनसक्छ । यस्तो सम’स्याले आमालाई असहज हुन्छ तर पेटमा भएको बच्चालाई भने कुनै असर नहुने चिकित्सक बताउँछन् ।